Siyaasiin & Saraakiil Hawiye oo ka fikirayaa ineey dhisaan Dowlad kamadax banaan Soomaaliya? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaSiyaasiin & Saraakiil Hawiye oo ka fikirayaa ineey dhisaan Dowlad kamadax banaan...
Siyaasiin & Saraakiil Hawiye oo ka fikirayaa ineey dhisaan Dowlad kamadax banaan Soomaaliya?
Sharar si hoose uga socda dalka Dibadiisa iyo Gudihiisa ayaa Siyaasiin iyo Saraakiil u dhalatay Beelaha Hawiye isku wareesanayaan in dhulka Hawiye ka goaan Soomaaliya inteeda kale .
Xogtaan oo ay heshay MOL ayeey wax ka waydiisay mid kamid ah Siyaasiinta Oo aan magaciisa qarinay ayaa no sheegay in Beelaha Hawiye ay dhibaato wayn ku qabaan Dowlad nimada Soomaaliya ayna yihiin cida kaliya ee qasaaraha ugu badan kasoo gaaray.
Masuul ka asagoo hadalkiisa wata ayuu yiri. Xurnimada ay heshay Soomaaliya Hawiye waxaa uga baxay dhiig iyo dhaqaale.
Dalka Markii uu kaligii Taliye gacanta ku dhigayna Dhiig iyo dhaqaale ayaa nooga baxay inaan dalka kasaarno kaligii Taliyahaas.
Ururo argagaxiso oo shisheeye ku xiran ayaa dalka qabsaday waxaana ku baabay Beelaha Hawiye dadkooda iyo deegaankooda.
Dib usoo nooleeynta Dowladnimada Beelaha Hawiye waxaa uga baxay qiimo aad usareeyo si loodifaaco dowladnimada rag badan ayaa uga leday xoolo tira badana wuu uga baxay.
Dowladii Markeey xoogeysatay kadib maanta waxaa gacan ku Gabad ah Beelaha Hawiye oo Madaxdii hore Qaranka ayaa naftooda labaxsan la oo dhowr jeer la isku dayay in la dilo.
Dalka waxaa markale qabsaday kaligii Taliye aan naxariis laheen .
Suaasha meesha taalo ayaa ah Puntland Dowlad baa u dhisan oo daarood ah . Isaaqna Dowlad ayaa udhisen oo soomaali ka goday. faaiidada Beelaha Hawiye ku qabaan ineey sidaan magaca soomaali maxeey tahay ama dhulkooda iyo dadkooda had iyo jeer siyaasad loogu laaynaya?
Siyaasiga aan wareeysanay ayaa yiri Soomaaliya wan ka tashaneeyna qiimo kasto hanoogu baxdo , qabaailada kale ama Kenya haku biiran ama Ethiopia Hawiye Dowlad ugaar ah ayuu dhisanahaa.
Xalada Soomaaliya ayaa faraha kabaxday markii dalka uu xoog ku qabsaday Kaligii Taliye Mohamed Abdullahi Farmaajo dowladnimada uu udeegsaday dano reereed iyo mid shaqsi wuxuuna Beelaha Hawiye ku gumaada adeegsiga ciidamo beelaha Daarood , Raxaweyn & .5.
lama iga side suurtagal ku noqon karto in Hawiye dhistaan Dowlad ka madax banaan Soomaaliya burbur iyo rafaad 30 sano ay ku jireen kadib.